နိုင်ငံခြားထွက် အလုပ်လုပ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အယင်လည်း ပို့စ်တချို့ ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီနေ့ Weekly Eleven Journal မှာ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ပြန်ဖတ်ဖြစ်တော့ နည်းနည်း ဘ၀င်မကျတာလေးတွေ တွေ့ရတယ်။ သတင်းဂျာနယ် အနေနဲ့ သတင်းရေးတာ ဘာမှ ပြောစရာ မရှိပါဘူး။ ဒါ သူတို့ အလုပ် သူတို့ လုပ်တာသာ ဖြစ်တယ်။ သို့ပေမဲ့ ဆောင်းပါးမှာ အင်တာဗျူးလုပ်ထားတဲ့ လူငယ်တစ်ဦးရဲ့ အဖြေကို နည်းနည်း ဘ၀င်မကျပါဘူး။ သူဖြေထားတာက
"ကျွန်တော် Civil နဲ့ ကျောင်းပြီးထားပါတယ်။ လတ်တလော ပြည်ပထွက်ဖို့ စီစဉ်တဲ့ အခါမှာ ၀ရိန်နဲ့ ထွက်တာ အလုပ်အခွင့်အလမ်း ပိုရနိုင်လို့ အဲဒါနဲ့ပဲ သွားဖို့လုပ်ထားပါတယ်။ ၀ရိန်ပညာကို အနီးကပ်မှ သင်တာဆိုတော့ အကျွမ်းကျင်ကြီး မဟုတ်ပေမဲ့ ဟိုမှာ လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်"။
တော်တော်လေးကို မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပါ။
သူပြောတဲ့ အတိုင်း သူက Civil နဲ့ကျောင်းပြီးထားတယ်ဆိုတဲ့ အတွက် သူဟာ BE သို့မဟုတ် AGTI အင်ဂျင်နီယာ သင်တန်းတစ်ခုခုက သင်တန်းဆင်းထားပြီးသား Professional Certificate Holder တစ်ဦးပါ။ ဘယ်ကျောင်းပဲတက်တက် ကျောင်းဆင်းတစ်ဦးအနေနဲ့ နိုင်ငံခြားထွက်ရရေးဆိုတာ တစ်ခုတည်းနဲ့ ကြုံရာ အလုပ်လုပ်မယ်၊ General Worker ပဲရရ ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်က လွဲနေတယ်။ ပြီးတော့ Civil နဲ့ ကျောင်းပြီးထားတဲ့ လူငယ်တစ်ဦးအတွက် Welding ပညာဆိုတာ Mechanical Subject ဖြစ်တဲ့ အတွက် အချိန်တို အတွင်းသင်ရင် ထိတွေ့မိတယ်ဆိုရုံထက် ပိုပြီး ကျွမ်းကျင်နိုင်စရာ အခွင့် အလမ်း အလွန်တရာမှ နည်းပါးပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်မှုနည်းပါးတဲ့ ပညာရပ်တစ်ခုနဲ့ ပြည်ပကို ထွက်လာမယ်ဆိုရင် အခက်အခဲ ကြုံစရာ အခွင့်အလမ်းပိုများပါတယ်။
ဆိုတော့ကာ အင်ဂျင်နီယာ ညီတော် အစ်ကိုတော်များ အနေနဲ့ နိုင်ငံခြား ထွက်ရရေး တစ်ခုတည်း အတွက် ကိုယ်ကိုင်ထားတဲ့ Certificate ကိုတော့ တန်ဖိုးချပစ်တာမျိုး မလုပ်စေလိုပါဘူး။ နိုင်ငံခြားထွက်တာာက နည်းလမ်းသိရင်၊ ငွေကြေးပမာဏတစ်ခု အကုန်ခံနိုင်ရင် ဘာမှ ခဲယဉ်းတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ဂျာနယ်ပါ ဆောင်းပါး အစမှာ ရေးထားသလို " ယနေ့ ဘွဲ့ရ မြန်မာလူငယ်များ ကြား ပြည်ပတွင် အထွေထွေ အလုပ်သမားအဖြစ် အလုပ်အကိုင် အမြန်ရရှိနိုင်ရေးအတွက်....." ဆိုတဲ့ စကားစုကကို တော်တော် အောက်ကျနောက်ကျ နိုင်နေပါပြီ။ ဘွဲ့ရလူငယ်များအနေနဲ့ ပြည်ပမှာ အထွေထွေ အလုပ်သမားထက် မြင့်တဲ့ ကျွမ်းကျင်လုပ်သား လုပ်လို့ ရနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ အများကြီးပါ။ အဲဒီ Information တွေဘယ်မှာ ရမလဲ။
အခု ဒီပို့စ်ကို ဖတ်နေတဲ့ စာဖတ်သူ အနေနဲ့ကတော့ အင်တာနက်၊ အီးမေးလ်နဲ့ မစိမ်းတဲ့ အတွက် အင်တာနက် သုံးပြီး ဆက်သွယ်ပါလို့ ပြောစရာလိုမယ် မထင်ပါဘူး။ သို့ပေမဲ့ ပြည်ပ ထွက်လာကြတဲ့ လူငယ် တော်တော်များများ အင်တာနက်၊ အီးမေးလ်နဲ့ ထိတွေ့မှု အားနည်းကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဆောင်းပါးမှာ ဖြေထားတဲ့ သူငယ်ချင်းလိုမျိုး အတွက် ဆိုရင်တော့ ဒီအကြံပေးမှု လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ မိမိမတိုင်ခင် ပြည်ပကို ရောက်နှင့်နေကြပြီးဖြစ်တဲ့ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပါ။ အကြံဥာဏ်တောင်းပါ။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ ကိုသွားရောက်လိုတဲ့ နိုင်ငံအကြောင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း အကြောင်း လေ့လာဖတ်ရှုပါ။ နိုင်ငံခြားရောက်ရင်ပြီးရော၊ ဟိုကျမှ ဘာပဲ လုပ်ရလုပ်ရ ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးနဲ့ တော့ မျက်စိစုံမှိတ် ဆင်ကန်းတောတိုး မလုပ်စေလိုပါ။
အထူးသဖြင့် ဘွဲ့၊ ဒီဂရီတစ်ခုခု ကိုင်ထားပြီးသား၊ Professional Certificate တစ်ခုခုကိုင်ထားပြီးသား သူငယ်ချင်းတို့ အတွက် "လောလောဆယ် General Worker ပဲရရ ဘာဖြစ်လည်းကွာ၊ ဟိုရောက်တော့ ပြောင်းတာပေါ့" ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးနဲ့ ဆိုရင်တော့ မိမိနိုင်ငံခြားထွက်ရေး အစီအစဉ်ကို အမြန်ဆုံး ပြန်လည် သုံးသပ်ပါ လို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံကိုပဲ ထွက်ပြီး အလုပ်လုပ် "နိုင်ငံခြားဆိုတာ ရုပ်ရှင်တွေ ဗီဒီယိုတွေမှာ တွေ့ရတဲ့ နတ်ဘုံနတ်နန်းကို သွားရတာ မျိုး မဟုတ်ပါဘူး"။ အဲဒီအတွက် မိမိကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ Educational Status နဲ့ ထိုက်သင့်တဲ့ အလုပ်မျိုးကိုသာ ရွေးချယ်လျှောက်ထားသင့်ပြီး၊ ပွဲမ၀င်ခင် ကတည်းက သိသင့်သိထိုက်သမျှ သတင်းအချက်အလက် အစုံအလင်ရရှိ သိရှိပြီးမှသာလျှင် နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ကို အစပြုသင့်ပါကြောင်း...
Filed Under : Career
felt sorry to read.
i'm also from ytu.
ကျွန်တော်လည်း civil တစ်ယောက်ပါ ။ စလုံးထွက်ဖို့ ကြိုးစားနေသူပါ ။ အဲသလို မျိုးဟိုရောာက်မှဘာဘယ်လုပ်ရလုပ်ရဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ထွက်တာကိုသဘောမကျပါဘူး ။ civil အနေနဲ့ ဟိုမှာ qs , site surperviser , c&s draftman စသည်ဖြင့် တစ်ခုတစ်ခုနဲ့ သွားဖို့ ကြိူးစားသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်..။
Review my website: http://Amigosdivebelize.com
Feel free to visit my site; http://Www.szakibazis.com/blogs/entry/The-Costa-Blanca-And-Alicante-In-Its-Festive-2013-05-04-0
like that, but I am sure that your job is
clearly identified asafair game. Both girls and boys feel the affect of onlyasecond’s
Feel free to visit my web blog ... http://dev.dorevox.com/index.php?do=/profile-39928/info
my page; http://viralsocialpop.com
Feel free to surf to my web site :: on.pro.ac
Takealook at my web blog :: www.agryd.com
Here is my website - ok mami feria valencia